Nhau - Iko Kushanda kweKuputika-chiratidzo Mafashama Mwenje
Iko Kushanda kweKuputika-chiratidzo Mafashama Mwenje
Yakatungamirwa kuputika-chiratidzo mafashama, mwenje mwenje, ekunze magetsi magetsi anewo basa rekushongedza nharaunda uye kushongedza nzvimbo. Mafashama emagetsi anoputika-anotorwa anobviswa kunze kwechimiro. Mafashama emwenje anotungamirwa anoputika emhando yemhando yemwenje yekunze inoshandiswa mudzimba.
Iyo inoshandisa hunhu hwepasi kupisa chizvarwa che LED kupedzisa mukati zvakachengeteka kuputika-chiratidzo, uye hupenyu hwakareba hwe LED mwenje sosi; bhatiri inochengetedza kupenya kwakadzikama mune yekupedzisira nhanho yekuchaja izere uye kuburitsa; kupisa dissipation michina yakaiswa pane mwenje dzimba kupedzisa inoshanda kupisa kupisa kweiyo module ye LED, Kuona kugadzikana kwekushandisa, kwakakodzera kuvhenekera mumigodhi yemarasha, peturu, njanji, mafashama kudzora uye kumwe kuita. Nyanzvi yakatungamira kuputika-chiratidzo mafashama mwenje Nyanzvi yakatungamira kuputika-chiratidzo mafashamaiti Kuti uwane zvinowoneka zvinooneka zvekushambadzira kwakasiyana mashandisirwo uye izvo zvinodiwa nemwenje mamiriro emidziyo, iyo inoratidzira yeakakwira bay mwenje inokwanisa kukwanisa kuburitsa akasiyana madhiidhi ekupararira kwechiedza. Nyanzvi yakatungamira kuputika-chiratidzo mafashama Nyanzvi yakatungamira kuputika-chiratidzo mafashama, mwenje mwenje wakajairika zvakaenzana zvakaenzana pamadziro ekumusoro kana epadivi enzvimbo yebasa kujekesa iyo yese yebasa pamusoro. Izvo zvinodikanwa kushandisa yakakwira-simba yakatungamirwa kuputika-chiratidzo mafashama uye yakatungamira kuputika-chiratidzo mafashama. Mwenje yemwenje, yakakwira-yakasimba gasi kuburitsa marambi kana huwandu hukuru hwemwenje ye fluorescent, hongu, kune mamwe magetsi-anoponesa akakwira-magetsi e-LED kuputika-chiratidzo mafashama emvura, nezvimwewo, mazhinji emagetsi emaindasitiri uye emigodhi marambi ari echikamu ichi.
Mwenje yemafashama e LED kupupura-chiratidzo chekuputika-chiratidzo chemafashama, uye kune zvakare kwakakwirira-simba kuputika-chiratidzo mafashama emagetsi ane simba rinosvika 400W. Mafashama-ekupupurika-emwenje ane akanakisa emagetsi kugarisana uye haazokonzere chero nyonganiso kumagetsi akasiyana emagetsi nemagetsi ekuparadzira magetsi. Goko rekuputika-chiratidzo mafashama anotora yepamusoro-tech yekunze kupopera tekinoroji, inova inopfeka isingagadzike, isina ngura, isina mvura uye guruva-proof, uye inokodzera nharaunda dzakasiyana dzakaomarara. Chirongwa chekushandisa che LED kuputika-chiratidzo mafashama anosanganisira:
1. Mwenje yemafashama e-LED akakomberedza akakodzera mwenje wakawandisa uye kuvhenekesa mashandiro munzvimbo dzakaita peturu, petrochemical, simbi, simba remagetsi, zviteshi zvechiteshi, mashandiro ekunze nenzvimbo dzekuvaka.
2. Inokodzera nzvimbo dzine zvidziviriro zvepamusoro uye mwando;
3. Inokodzera IIA, IIB, IIC gasi nharaunda;
4. Inokodzera T1-T6 tembiricha giredhi.